Go’aan laga gaaray gabadha Soomaalida ee dishay ninkii isku dayey inuu kufsado | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada English News kufsi Go’aan laga gaaray gabadha Soomaalida ee dishay ninkii isku dayey inuu kufsado
Go’aan laga gaaray gabadha Soomaalida ee dishay ninkii isku dayey inuu kufsado
Saturday, May 28, 2022 Bulshada , English News , kufsi
Bulsha:- Dacwad-oogaha guud ee Masar ayaa Jimchii amray in lasii daayo gabadha Soomaalida ah ee dishay nin Masri ah oo bajaaj ku waday kadib markii isku dayey inuu kufsado.
Go’aanka dacwad-oogaha oo ah mid jiri doona illaa baaritaanka laga soo geba-gabeeyo ayaa yimid kadib markii booliska iyo dhaqaatiir sameeyey tijaabo caafimaad ay xaqiijiyeen inay sax tahay doodda gabadha ee ah inay is-difaaceysay kadib markii bajaalaha uu isku dayey inuu kufsado.
Sida uu sheegay xafiiska dacwad-oogaha, wuxuu 17-kii May helay warbixin sheegeysay in meydka Bajaajle laga helay waddo ku taalla banaanka xaafadda 6-da October ee Giza.
Waxyar kadib gabadha Soomaalida oo markii hore da’deeda lagu sheegay 16 jir, balse hadda la sheegay inay tahay 15 jir, ayaa booliska isku soo dhiibtay ayada oo timid saldhiiga booliska Giza, islamarkaana ku wargelisay inay dishay bajaajle.
Gabadha Soomaalida, oo aan magaceeda la shaacin, ayaa sheegtay in ninka uu ula soo baxay mindi, iskuna dayey inuu kufsado, balse ay iska caabisay ayada oo dhaawac uu ka gaaray faraha balse ugu dambeyn ku guuleysatay inay mindida kala wareegto kadibna isaga ku disho.
Waxay intaas ku dartay in qorshaheeda uu ahaa kaliya inay ninka dhaawacdo, si ay uga badbaado, balse nasiib-darro uu geeriyooday.
“Waxaan doonayey kaliya inaan sharafteeda dhowro, oo aan is-difaaco, mana damacsaneyn inaan dilo balse wuu dhintay,” ayey tiri gabadha sida uu kasoo xigtay wargeyska Al-Ahram ee Qaahira.
Dacwad-oogaha ayaa sheegay in booliska iyo dhaqaatiirta caafimaadba ay muujiyeen in sida ay gabadha wax u sheegeyso la rumeysan karo.
Halkan Hoose ka Dhageeyso
Sidoo kale, baaritaan lagu sameeyey meydka Bajaajle-ha ayaa muujiyey in habka uu u dhintay iyo sida ay wax u sheegtay gabadha ay is-waafaqayaan.
Sheekada gabadha Soomaalida ah ayaa aad u qabsatay baraha bulshada Masar, ayada oo heshay taageero badan oo lagu difaacayo, waxaana dad badan ay ku baaqayaan in qareenada ugu caansan Masar iyo Golaha Qaran ee Haweenka Masar ay u istaagaan inay difaacaan.